Sample Page - Mingalarday
လူတိုင်း လူတိုင်း အတွက် တကယ်မှန်တဲ့ အချစ်ဗေဒင်လေးပါ..။ ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်..။
တပ်မတော်သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ လူမင်း မြန်မ့ာရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌဟောင်း ဦးလူမင်း က အစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက်ကို ဖြတ်သန်းလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရခေတ်ပေါင်းစုံရဲ့ အနုပညာလောကမှာ ကျင်လည်လာတဲ့သူဖြစ်တဲ့ အတွက် အတားအဆီး အားလုံးကို...
မန္တလေးက ကိုရင်လေး ဓမ္မပါလ ရဲ့ သီလပေး တရားဟောနေတဲ့.. တရားပွဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်ပါ.
သရုပ်ဆောင် စိုင်းလွှမ်းတစ်ယောက်ကတော့ ကွဲကွာနေကြတဲ့ မင်းသမီးထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ သူတို့သားဖနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ရင်ဖွင့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုအရေး အေးတိအေးစက်ရှိခဲ့တာနှစ်နဲ့ချီကြာခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်များစွာက သူတို့သားဖအပေါ် အမြင်မှားနေတာတွေကို ခုလို ရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကြိုက်ပြီ . ငါရိုသေရတဲ့သူတွေ ဝိုင်းတာလို့ငြိမ်နေတာ ကို...
တရုတ်​မှာ​တော့ ​သေဒဏ်​​ပေးပြီး သတ်​လိုက်​တယ်​ ( Copy ) နာမည်ကြီး ငရုတ်သီးမှုန့်တွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရောအနှောတွေ၊ မှိုတွေ၊ အရောင်ဆိုးဆေးတွေ ပါဝင်မှုများကြောင်း တွေ့ရှိသတဲ့! ပြည်သူတွေ အော်ကြ ဆဲကြ ခဏပေါ့ နောက်တော့...
ဗိုက်ခေါက်ထူ/ ဗိုက်ပူလို့ အလှပျက်နေသော ကိုကို မမ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် များအတွက် လက်တွေ့ (၇) ရက်အတွင်း ဗိုက်ချပ်ပြီး အဆီကျစေတဲ့ ဆေးနည်း..!
အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်အောက်ကအချက်တွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါ (1) ပုံမှန်ငွေဝင်လမ်းတခုခုရှိနေပီလားးး???(စီးပွားရေး) စီးပွားရေးမရှိဘဲဘယ်အိမ်ထောင်မှတည်ဆောက်လို့မရဘူး စီးပွားရေးရှိတာတောင်စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ကြတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေထုနဲ့ဒေးရှိနေကြတာ ဘာဝင်ငွေဘာစီးပွားရေးမှမရှိဘဲနဲ့တော့အိမ်ထောင်ပြုဖို့မစဉ်းစားပါသေးနဲ့ဦးးး။ (2)ကိုယ်လက်တွဲမယ့်သူကိုအရာရာတိုင်းခွင့်လွှတ်သည်းခံနိုင်ပီလားး??? ကိုယ်လက်တွဲမယ့်သူကခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ဆိုတာတော့ ရှိချင်မှရှိမယ်။ သူရဲ့အတိတ်ဆိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဖြစ်လာမယ့်ပြသနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လောက်ထိနားလည်ပေးနိုင်ပီလဲ ဘယ်လောက်ထိရောနားလည်ပေးနိုင်သလဲသူရဲ့အကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းအားလုံးကိုလက်ခံနိုင်ပီလားးးးး များသောအားဖြင့် ဒီမေးခွန်းကမွှန်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ခံနိုင်တယ်ပဲဖြေကြမှာပဲဒါမယ့်သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ (3)အိမ်ထောင်မပြုခင် အရင်ဆုံး Plan ချထားပါ။ စီးပွားရေးးး/အိမ်ထောင်ရေး/သားသမီးရေး...